Tahotra ny aretina « Coronavirus » :: Mpianatra folo any Shina mangataka alalana hiverina aty Madagasikara • AoRaha
Tahotra ny aretina « Coronavirus » Mpianatra folo any Shina mangataka alalana hiverina aty Madagasikara
Teratany malagasy am-polony any Shina no mangataka alalana hiverina aty Madagasikara, araka ny fangatahana voarain’ny minisiteran’ny Raraharam-bahiny malagasy , taorian’ny naoty navoakan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka mikasika ny fahafahana mangataka alalana manokana hiverina an-tanindrazana, tamin’ny 10 febroary 2020 lasa teo. Ny tahotra noho ny fiparitahan’ny valanaretina” coronavirus” any Shina no antony angatahan’izy ireo hody an-tanindrazana. Mbola tsy nisy nahazo lalana manokana hiverina mihitsy anefa izy ireo.
“ Hojerena manokana ny fepetra hahafahana mamerina azy ireo eto an-tanindrazana”, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny , omaly. Fantatra fa ny fanjakana sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka no miantoka ny fiarovana azy ireo rehefa tonga eto an-tanindrazana. Tsy maintsy manao fitiliana rahateo izy ireo rehefa migadona eny amin’ny seranam-piaramanidina.
Anjaran’izy ireo no miantoka ny fitaovana rehetra ilaina amin’ny fitiliana, amin’izay fotoana izay. Somary lafolafo izany amin’ny vola ariary”, hoy ny fanampim-panazavana voaray avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Mitohy kosa ny fanaraha-maso an’ireo olona tonga eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Olona iray avy any Hong Kong no fantatra fa nalefa avy hatrany eny amin’ny Hopitaly Anosiala. Afak’omaly izy no nigadona teto Madagasikara. “Miisa roa ambin’ny folo ireo mbola atoka-monina eny amin’ny hopitaly, ankehitriny. Efa nivaly ny fitiliana natao tamin’ilay olona noahiana ho mitondra ny tsimok’aretina, saingy voamarina fa tsy voan’ny “coronavirus” izy”, hoy ny loharanom-baovao iray avy eny Anosiala.
Efa tafakatra arivo mahery ny olona namoy ny ainy noho ny “coronavirus” any Shina. Nanamafy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka Malagasy, fa azo sitranina tsara ireo aretina amin’ny olona miaraka amin’ny “coronavirus”, toy ny sery, aretin-kibo, sy ny fiakaran’ny hafanana satria tsy mbola misy fanafany io aretina io. Nanome hafatra ho an’ny daholobe mikasika an’ity aretina ity ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly.
Fanodikodinam-bolam-panjakana sy kolikoly :: Miantso andraikitra goavana amin’ny HCJ ny Bianco sy ny Pac
Hitohy ny orana ato anatin’ny roa andro